Lehilahy nitsirara tetsy Besarety Matin’ny hanohanana sa valanaretina ?
Omaly tokony ho tamin'ny 5ora hariva sy 20 minitra no nisiana olona nitsirara tampoka voalaza fa maty tetsy Besarety. Efa tonga teny ny tompon'andraikitra nijery ifotony ny zava-misy.
Tena mahalasa saina ny tranga samihafa tato ho ato amin’ny fisiana olona torana, na mitsirara, na maty tampoka eny an-dalàna. Mety ho ny valanaretina, mety ho hanohanana, fa eo ihany koa ny adin-tsaina sy hanohanana ka miteraka aretina tsy fidiny. Fotoana mampihombo be ny rarin-tsaina sy ny fahatapahana làlan-drà rahateo ny vanim-potoana lalovana, ka mila mahay mandamin-tsaina ihany isika Malagasy. Na izany aza, tena ilàna fiheverana satria mitovitovy amin’izao ny zava-nisy tany Chine tamin’ny fiandohan’ny coronavirus, izay nisiana olona mitsirarara sy mitsipaka ho azy eny an-dalàna.